Dowladda Itoobiya oo shaacisay magaalooyinka ay ka qabsatay Tigreeda - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dowladda Itoobiya oo shaacisay magaalooyinka ay ka qabsatay Tigreeda
Ciidanka dowladda Itoobiya ee howlgalka ka wadda gobolka Tigreeda ayaa shaaciyay Magaalooyin muhiim ah oo saacaddihii lasoo dhaafay ka qabsadeen jamhadda TPLF ka dib markii ciidanka Milatarigu ay xoog kula wareegeen.
Dowladda ayaa sheegtay inay ciidamadeeda ay la wareegeen magaalooyiinka Aksum iyo Adwa.
Taliyaha ciiddamada cirka, Yilma Mardasa ayaa sheegay in ay ogaadeen islamarkaana burburiyeen goobtii ay Tigreegu gantaalada kasoo riddayeen.
Wuxuuna sheegay in ay xadka Axmaarada ee galbeedka ka qoddeen god 5- Kilomiter ah oo lagu kaydinayay gantaaladan.
Yilma Merdasa ayaa sheegay innay sannado baddan usii diyaar garoobayeen, wuxuuna xusay in maamulka TPLF xitaa aysan goobtan aqoonin.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Subax 21-11-2020
Next articleSaddex Madaxweyne oo hore oo loo xil saaray xal u helida dagaalka Itoobiya